China XB-025, PP Traing Wheel, N'ihu nkata Grils igwe kwụ otu ebe na-emepụta na suppliers | Xuxiang
ụgbọelu ígwè, CP ma ọ bụ ED, nwere ike ịbụ na ogbo oche na zuru ike azụ ụdị
mudgards Plastic ma ọ bụ ígwè, CP ma ọ bụ na-ese
XB-025 etiti High carbon ígwè ịgbado ọkụ etiti. Ihe mkpuchi aka na-adịghị amị amị na nke na-adịgide adịgide, saddles na-eku ume na nke na-agaghị eyi, taya gbasapụrụ agbachapụ, na agba gburugburu gburugburu iji chebe uto dị mma nke ụmụ ọhụrụ! Ịgba ịnyịnya ígwè ndị mara mma na-eme ka ụmụaka nwee mmasị ịnya ịnyịnya na egwuregwu!
XB-025 dị fechaa ma na-adịgide adịgide. breeki caliper n'ihu na brek na-ejide azụ maka nchekwa agbakwunyere na ọnọdụ ihu igwe niile. Ogwe aka na-agbanwe agbanwe na ịdị elu oche maka ụmụaka na-eto eto. ejiji mudguard na-eme ka ụmụaka nwee igwe kwụ otu ebe pụrụ iche ma dị jụụ!
The XB-025 eji maka elu carbon ígwè etiti, Cove handlebar, caliper breeki na azụ na-ejide breeki, zuru yinye mkpuchi, ígwè crank, PVA ọzụzụ wheel, 10g yi okwu, elu àgwà saddle, n'ihu aluminum alloy karama, 2.125 taya, mara mma na-ese. , na ihe mmado elu..
agba Pink, Purple, Blue, ma ọ bụ dị ka mkpa gị
Anyị na-agba mbọ na-anapụta mfe, oge na-azọpụta na ego na-azọpụta otu nkwụsị ịzụrụ enyemaka nke n'ji maka Chinese N'ogbe China Ejiji Ụdị Ụmụaka Bicycle Ụmụaka Bike Factory Price / Child Bicycle for 10 Years Old Child, Na-eguzo taa na na anya n'ime Ogologo oge, anyị ji ezi obi na-anabata ndị ahịa niile gburugburu ụwa iji kwado anyị.
Chinese n'ogbe China Boy Kids Bicycle na ọnụ ala anyịnya igwe ụmụaka price, Ugbu a, anyị eguzobewo ogologo oge, kwụsiri ike na ezi azụmahịa mmekọrịta na ọtụtụ ndị na-emepụta na wholesalers gburugburu ụwa. Ugbu a, anyị anọwo na-atụ anya ka anyị na ndị ahịa si mba ofesi na-emekọ ihe ọnụ dabere na uru otu. Jide n'aka na ị na-enwere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ.
Nke gara aga: XB-026, karama Aluminom, igwe igwe nwoke,
Osote: XB-024, Mpekere PP, Kaadị Wheel, Wheel Ọzụzụ na-egbuke egbuke, 10G kwuru
Ụmụ agbọghọ na-ewu ewu na-agba ígwè ígwè ụmụaka ịnyịnya ígwè M...
XB-012, na-ejide breeki, agba 4, ya na Pedal
Ụmụaka Bicycle / Ụmụaka Bike / 2 wheel Bike / Eziokwu ...
Onye nrụpụta China / ọnụ ahịa n'ogbe / 12 inch B ...
Ụmụaka ịnyịnya ígwè / wiil Ọzụzụ na-egbuke egbuke / 2 wh...